I-15 ephezulu ye-Scholarship engaziwayo eCanada 2022
Oku kunokuba kukumangalise kuwe kodwa kukho izifundiswa ezingafunekiyo eCanada, Oko kukuthi, ezi nkxaso-mali zibonelelwa kodwa abafundi abazibangi. Oku ikakhulu kungenxa yokuba ababazi ubukho babo yiyo loo nto kungekho sicelo senziweyo siphumelela ukuba babenze bahambe bengafunwanga.
Kule nqaku, uya kufunda malunga nezifundo ezingafunekiyo eCanada kunye nenkqubo yokwenza isicelo efunekayo ukubanga. Ufunde kakuhle!
Xa uqaphela indawo ekuyiwa kuyo kwimfundo ephezulu emhlabeni, iCanada ihlala ibonakala kwizigaba ezintathu eziphezulu. Amaziko akhe aphakamileyo abonwa kwihlabathi liphela ngezatifikethi zemfundo ezikumgangatho wehlabathi kunye nezatifikethi zemigangatho apho i-HR nganye ibalulekile.
Ezinye zeeyunivesithi kunye neenkqubo eCanada ziphakathi kwezona zibalaseleyo kwihlabathi, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda, amanqanaba, amanqanaba obugqirha. Esi sesinye sezizathu zokuba abafundi bamanye amazwe bathontelane phaya minyaka le ukuya kuthi ga kwimfundo yakhe esemgangathweni.
Ilizwe, Canada, liyaziwa ngokuphosa iingcango zalo ngokubanzi kubafundi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ezenza ukuba libe nelona nani liphezulu labafundi bamanye amazwe emhlabeni. Ngaphandle kokubonelela ngemfundo esemgangathweni kubo bonke abafundi, kukwakho namanyathelo abekiweyo okunceda abafundi ukuba bakwazi ukufikelela kwimfundo.
Izifundo zamanye amazwe zibiza kakhulu kwaye sesona sithintelo sikhulu sokuba kutheni abantu abaninzi bengenakufunda phesheya. ICanada nayo ayisiyonto ikhethekileyo kodwa kukho uluhlu olude lwamathuba ezemali kunye neenkqubo eziyilelwe ukunceda abafundi ekuqhubekeni kweenjongo zabo.
Eli lizwe aliboneleli kuphela ngezifundo kubemi balo kuphela kodwa nakwaba bafundi bamazwe aphesheya abaze kufuna imfundo esemgangathweni kunye nokuphucula ubomi babo. Qho ngonyaka kubekelwa bucala izigidi zeedola ukulungiselela iinjongo zokufunda.
Ezi minikelo zihlala zivela kwiindlela ezininzi ezinjengemibutho yesisa, iiyunivesithi / iikholeji, urhulumente, abafundi, kunye nabanye abantu abazizityebi. Yiyo loo nto ukufundela kuphuhliswa ukuxhasa abafundi basekhaya nakwamanye amazwe eCanada.
Kukho izibonelelo zokufunda ezixhaswe ngokupheleleyo nangokuyingxenye, iibhasari, izibonelelo, amabhaso, njl njl. Zonke ziyilelwe ukunceda kunye nokukhuthaza abafundi ukuba bafezekise iphupha labo lemfundo esemgangathweni. La mathuba oncedo lwezezimali abizwa ngamagama kwaye ahlelwe kakuhle nganye ineenkqubo ezahlukeneyo zesicelo, ixabiso, iimfuno zokufaneleka kunye neenqobo zokugweba, kunye nomhla obekiweyo.
Ziindaba eziqhelekileyo ukuba iKhanada ibonelela ngezifundo ezininzi ngonyaka kodwa into ongayaziyo kukuba uninzi lwezi nkxaso mali ziye zingafunwa. Ngapha koko, izigidi zeedola kwizifundi azifunwa minyaka le eCanada kuphela.
Ngokuqinisekileyo ubuza umbuzo- kutheni bengahambanga? -Kunokubakho izinto ezithile ezinje ngezi:
Azi ithandwa, oko kukuthi, abafundi abazi ngazo
Ixabiso labo lincinci kwaye abafundi abaninzi bakhetha ukufaka izicelo zokufunda ngemali enexabiso elikhulu ukuze bakwazi ukuphuma kube kanye nakakhulu.
Akukho bafundi baneleyo abafaka izicelo zabo
Inkqubo yabo yokwenza isicelo inokuba ngumsebenzi otyhafisayo okanye iikhrayitheriya zokufaneleka kwabo ziphezulu kakhulu ukuba abafundi bahlangane nazo, ngaloo ndlela bezishiya zilula.
Ezi inokuba zizizathu zokuba kukho izifundiswa ezingafuniswanga eCanada, nokuba ziphi na izizathu ezongezelelekileyo apho kusenokwenzeka ukuba unethamsanqa lokuba uza kufunda ngezi zifundo zingafuniswanga eCanada.
Ungasifaka isicelo sale mali yokufunda ungabizwanga nayo, ungayenzi into ejijekileyo, engafunwanga ayithethi ukuba ngekhe ubaphumelele okanye awufanele uyenze isicelo. Kuthetha ukuba izifundiswa ezibonelelweyo kodwa akukho bafundi bafake izicelo ngenxa yezizathu ezithile ezidweliswe apha ngasentla.
Kubalulekile ukuba ufunde ngezi zifundo zingafuniswanga eCanada, sizibhalele kule post kunye nenkqubo yesicelo sabo, ukufaneleka, kunye nazo zonke ezinye iinkcukacha ezinokukunceda ekufakeni isicelo ngempumelelo kwaye ubaphumelele.
1 Ulwabiwo-mali olungabhalwanga eCanada
1.1 Iibhasari zeRaven
1.2 IBhodi yeNdawo eThengisa izindlu yaseToronto (TREBB) kwi-Scholarship kaMongameli odlulileyo
1.3 Jonga owakho (Re) uguquko lweeBhaso zeeScholarship Contest
1.4 Ikholeji yaseCanada kunye neYunivesithi Fair- $ 3,500 Zuza amabhaso
1.5 Ushishino lweeScholarships
1.6 I-TELUS Innovation Scholarship
1.7 I-De Beers Group Scholarship yaBasetyhini baseKhanada
1.8 Izifundo zoBomi beManulife zoBomi
1.9 Ubudala boPhando lobuDlelwane kunye neeBhasari
1.10 Ibhaso leBeaverbrook Scholars
1.11 UMarcella Linehan Scholarship
1.12 Inkqubo kaJean Murray-Moray Sinclair Theatre
1.13 I-MTA Edward M Evanochko Wezothutho
1.14 ULaura Ulluriaq Gauthier Scholarship
1.15 Inkqubo yaBafundi beLaurier
1.16 I ngcebiso
Ulwabiwo-mali olungabhalwanga eCanada
Apha, siye saqulunqa uluhlu lwe-15 ephezulu yokufunda engafuniswanga eCanada kunye neenkcukacha zabo eziyimfuneko ayisiyiyo i-snob yokufunda, qhubeka nokubanga ezi zifundo zingezantsi:
IBhodi yeNdawo eThengisa izindlu yaseToronto (TREBB) kwi-Scholarship kaMongameli odlulileyo
Jonga owakho (Re) uguquko lweeBhaso zeeScholarship Contest
Ikholeji yaseCanada kunye neYunivesithi Fair- $ 3,500 Zuza amabhaso
I-TELUS Innovation Scholarship
I-De Beers Group Scholarship yaBasetyhini baseKhanada
Izifundo zoBomi beManulife zoBomi
Ubudala boPhando lobuDlelwane kunye neeBhasari
Ibhaso leBeaverbrook Scholars
UMarcella Linehan Scholarship
Inkqubo kaJean Murray-Moray Sinclair Theatre
I-MTA Edward M Evanochko Wezothutho
ULaura Ulluriaq Gauthier Scholarship
Inkqubo yaBafundi beLaurier
Iibhasari zeRaven yenye yezifundo ezingafuniswanga eCanada, nangona ibhasari isajolise ekuhlawuleni iindleko zakho zaseyunivesithi. Ibhaso lixabiswa kwi- $ 2,000 kwaye linikezelwa yiYunivesithi yaseNyakatho yeBritish Columbia kwaye isebenza kuphela apho.
Libhaso elingenakuhlaziywa elinokufumaneka kubafundi abeza eyunivesithi okokuqala ababonakalise ukusebenza ngokukuko kwezemfundo kunye neemfuno zezemali. Iimfuno zokufaneleka zezi:
Umfaki-sicelo kufuneka abhalise kwiyunivesithi ukuze afumane isatifikethi, idiploma, okanye inkqubo ye-bachelor kuyo nayiphi na inkalo yokufunda.
Vula abafundi bamanye amazwe nabasekhaya
Kuya kufuneka ndize kufunda kwiDyunivesithi yaseMantla yeBritish Columbia
Isicelo seli bhasari senziwe kwi-Intanethi, yabona Umhla wokugqibela apha.
I-TREBB isungule inkqubo yokufunda ngo-2007 kwaye isasebenza ukuza kuthi ga ngoku, kodwa bambalwa kakhulu abantu abayaziyo ngayo eyenza ukuba ibe yenye yezifundo ezingafunekiyo eCanada. Qho ngonyaka, i-TREBB inika i-15,000 yeedola kubafundi abane beBanga le-12 abaphumelela imfundo yamabanga aphakamileyo.
Ibhodi ikwabonelela nge- $ 5,000 yokuqala indawo yokuqala kunye ne- $ 2,500 yesibini- indawo yesibini yokufunda. Ukuphumelela kwesi sibonelelo sokufunda kulula kodwa iincoko zamagama asezantsi ezingama-1,500 kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo kwaye kunokuba sisizathu sokuba sishiywe singafunwanga.
Ngaphandle kwesincoko - esihlala kuso nasiphi na isihloko esikhethwe yibhodi- enye inqobo yokuba abafundi kufuneka babonise ukusebenza ngokugqwesileyo kwezifundo, ubuchule bobunkokeli, kunye nokuthatha inxaxheba kwabahlali. Isicelo sivulelekile kubahlali abasisigxina kunye nabemi baseCanada.
Ukuba unayo into efunekayo ukuze uphumelele kule nkxaso-mali, qhubeka uye Faka isicelo kwaye ubone umhla wokugqibela apha.
Le yenye yezifundo ezingafuniswanga eCanada kwaye ibonelelwa liBhunga eliNoxanduva lokuNgcakaza (RGC). Kuya kufuneka udlale umdlalo wevidiyo ukuphumelela le mfundo, inamanqanaba amathathu nje enzelwe ukuvavanya ukucinga kwakho- kusenokwenzeka ukuba kunzima yiyo loo nto kungumfundi ongafuniswanga.
Izifundo ezintathu ziyafumaneka- $ 1,500, $ 1,000, kunye ne- $ 500- kufuneka ube uneminyaka eli-18 nangaphezulu kwaye ubhalise kwikholeji yaseCanada okanye eyunivesithi ukuze ufaneleke. Kuvulelekile kubo bobabini abafundi bamanye amazwe nabasekhaya kuzo zonke iinkqubo kunye namanqanaba okufunda, ukusuka kwizidiploma zamabanga aphakamileyo ukuya kugqirha.
Ukudlala umdlalo we-reflex wokuphumelela isifundi kuyinto emnandi, fumana ndiqale apha.
Ikholeji yaseCanada kunye neYunivesithi Fair zikubonelela ngesifundo sasimahla semester!
Le yenye yezifundo ezingafuniswanga eCanada kwaye ungayibanga ngoku ngamanyathelo amane alula.
Bhalisela ikholeji yaseKhanada kunye neyunivesithi efanelekileyo kwaye uzimase
Isicelo solwazi ubuncinci komnye wababonisi kumboniso.
Jonga iindawo zokuhlala kwaye uthathe ii-webinars ezimbalwa kwaye ekugqibeleni,
Buza imibuzo malunga neenkqubo onomdla kuzo.
Ngokugcwalisa konke oku kungentla uyakufanelekela ukuphumelela i- $ 3,500 onokuthi uyisebenzise xa usiya kufunda kumabanga aphakamileyo.
I-scholarship ivulelekile kubafundi bamazwe ngamazwe kunye nabasekhaya nakwiphina ixesha elizeleyo okanye lexeshana kuwo onke amanqanaba nakwimimandla yokufunda. Bhalisa ngoku!
Eli xabiso lokufunda ngaphezulu kwe- $ 130,000, ebonelelwe yi-Electro-Federation Canada (EFC) kunye naMalungu ayo, kwaye ihlala yenye yezifundo ezingafunekiyo eCanada. I $ 130,000 igubungela ukuya kuthi ga kwi-52 eyahlukeneyo yokufunda kwaye unokufaka isicelo sobuninzi besithathu.
Eli lithuba lakho lokuyibanga!
Abafakizicelo kufuneka babe ngabemi baseCanada okanye abahlali abasisigxina abagqibe unyaka wabo wokuqala kwiziko eligunyazisiweyo lasesekondari kwaye bagcine ubuncinci be-75%. Ngasinye sezifundo ze52 zineekhrayitheriya ezithile, uphonononge apha.
Le yenye yeengxowa-mali ezingafunekiyo eCanada ezibonelelwe yiYunivesithi yaseNyakatho yeBritish Columbia kodwa yanikelwa yi-TELUS ekubumbeni nasekuphembeleleni ukufikelela kufundo lwabahlali baseMantla eBritish Columbia.
Ixabiso li- $ 3,000 evulekileyo kubafundi abasisigxina ababonisa ukuqaqamba kwezemfundo kwaye bangabahlali baseMantla eBritish Columbia. Kuya kufuneka uqhubeke nesidanga se-bachelor kuyo nayiphi na inkalo yokufunda.
Le nkqubo yokufunda ayibonakali ngathi ngumsebenzi onzima. Unomdla wokubanga? Cofa apha.
Ngaba umangalisiwe kukuba kukho izifundiswa ezingafuniswanga eCanada kubafazi?
Esi sisibonelelo sokufunda esinikelwe liZizwe eziManyeneyo (i-UN) laBasetyhini (i-HeForShe Initiative) eyilelwe ukukhuthaza ukubandakanywa kwabasetyhini, ngakumbi abaphuma kwimimandla yemveli, baye kwimfundo ephezulu. Kukho amabhaso amane okanye nangaphezulu afumanekayo nganye inexabiso le- $ 2,400.
Ukufaka ibango kule mali yokufunda, abafaki-zicelo kufuneka bahlangabezane nezi mfuno zilandelayo:
Kufuneka ube ungumfundi wasekhaya, oko kukuthi, umhlali osisigxina okanye ummi waseCanada
Abafazi kuphela ekufuneka befaka isicelo
Kuya kufuneka bangene kunyaka wabo wokuqala wenkqubo yesidanga sokuqala kwiziko elisemthethweni laseCanada.
Kuya kufuneka ungene kwi-STEM (iSayensi, iTekhnoloji, ubuNjineli, kunye neMathematics) okanye ikhosi enxulumene ne-STEM.
Banga le mali yokufunda apha
Esi yi- $ 10,000 yokufunda eyiManulife yokuxhasa abafundi abafuna ukwenza izifundo zasemva kwesekondari kodwa baphulukana nabazali okanye abagcini babo kwaye bashiyeke bengenayo i-inshurensi yobomi. Abafundi abakule meko abanako, nangayiphi na indlela, ukuzixhasa ukuze bafezekise iinjongo zabo zomsebenzi kwaye kulapho kungena khona uManulife.
Ngale mfundo, umfundi ekugqibeleni uya kuba nakho ukugqiba imfundo yabo ephezulu ngokulula. Ukufaka isicelo sale bhasari, usenokuba usandula ukwamkelwa okanye sele ubhalisile kwiziko eliphakamileyo njengekholeji, iyunivesithi, okanye isikolo soqeqesho.
Kuya kufuneka uphinde ube phakathi kweminyaka eyi-17 kunye ne-24 yeminyaka ubudala ngexesha lesicelo. Ngenisa isincoko esinamagama angama-500 okanye ividiyo yemizuzu emi-3 malunga nokuba ukulahleka komzali okanye komgcini wakho kukuchaphazele njani ngokwezezimali nangokweemvakalelo.
Jonga umhla wokugqibela kunye nesicelo apha
Umnikeli wale nkxaso-mali yiAges Foundation Fund kwaye unikezelwa yindawo engaqhelekanga yoPhando ngeeNzululwazi, eyilelwe ukunceda abafundi abafuna ukulandela imfundo ephezulu.
I-15,000 yeedola iya kuhanjiswa rhoqo ngonyaka ngale nkqubo yesicelo kwaye amabhaso aya kunikwa ngezi zixa zilandelayo:
Ibhaso elinye le- $ 5,000
Enye ye- $ 5,000 BIPOC (abaMnyama, abaMthonyama, kunye nabanye abantu boMbala)
Iibhasari ezintlanu zeedola ngokuxhomekeke kwinani lilonke lezicelo ezingekahlawulwa.
Ukuze babe nokufanelekela, abafaki-zicelo kufuneka babhalise njengomfundi ophumelele kwiziko laseKhanada okanye nakwamanye amazwe, kufuneka benze uphando kwipropathi enqabileyo yoVimba woPhando ngokujolisa kwindalo okanye icandelo.
I-Ages Foundation yoBambiswano noPhando kunye neBhasari yenye yezifundo ezingafunekiyo eCanada kwaye ukuba ufuna ukuyibanga, faka isicelo apha.
Ibhaso le-Beaverbrook Scholars yenye yezifundo ezingafunekiyo eCanada kwaye isekwa ngabantu beBeverbrookrook Scholars kwaye igcinwe kuphela kwiYunivesithi yaseNew Brunswick. I-scholarship inikezelwa kubafundi abathathu ababonisa ukusebenza kakuhle kwezemfundo, iimfuno zezemali kunye nokubandakanyeka koluntu.
Ixabiso lokufunda yi- $ 50,000 yomfundi ngamnye egubungela iminyaka emine yezifundo zabo zesidanga sokuqala. Ngaphandle kokufaneleka apha ngasentla, abafaki-zicelo kufuneka babe ngabahlali baseNew Brunswick kwaye kufuneka baphumelele kwisikolo esiphakamileyo eNew Brunswick ukulandela nayiphi na inkqubo ye-bachelor kwiYunivesithi yaseNew Brunswick.
Ndiyabheja awazi ukuba kukho izifundi kwabo bakwicandelo lobuhlengikazi, akunjalo? Eli bhaso liyinxalenye yolu luhlu kuba ababaninzi abantu abayaziyo ukuba ikhona eyenza ukuba ibe yenye yezifundo ezingafuniswanga eCanada.
UMarcella Linehan Scholarship linikezelwa minyaka le kumongikazi obhalisiweyo ogqiba i-Master of Nursing okanye i-Doctorate yeNkqubo yobuNesi. Ixabiso le-scholarship yi- $ 2,000 yabo babhalise kwinkqubo yoonesi ngokusisigxina kunye ne- $ 1,000 yabafundi abasisiqingatha sexesha.
Ukuze ufanelekele ukubhalwa kwemali, kuya kufuneka ubhalise kwinkqubo yokuthweswa isidanga kwi-yunivesithi yaseCanada eyamkelweyo, kuya kufuneka ukuba ube uphumelele ubuncinci umndilili we-70% kwinkqubo yabo yokonga yangaphambili, kwaye ubonakalise nenqanaba elingaphezulu komndilili / inzala kwindawo ethile yokonga.
Ngaba unomdla kwesi sifundi? Ibambe apha.
Le ngxowa-mali yenzelwe ngokukodwa abafundi ababhalise okanye abanomdla wokuqhubela phambili kwimidlalo yeqonga. Yiyo yonke imfuno oya kuyidinga ukufaka isicelo kwaye uphumelele esi sibonelelo.
Qho ngonyaka, i-MTA (iManitoba Trucking Association) ibonelela nge- $ 10,000 yokufunda enikezelwa ngokwamacandelo amabini: amabhaso ezifundo kunye namabhaso okufunda. Ukufaka isicelo sale bhasari kufuneka ube kwiphondo laseManitoba kwaye ufuna ukufunda kwiziko elivunyiweyo lasesekondari kwicandelo lezothutho.
Eli bhaso yenye yezifundo ezingafuniswanga eCanada, ukuba unomdla wokulibanga Qalisa isicelo sakho ngoku.
Le yi- $ 5,000 yexabiso lemali yokufunda ebonelelwa yiQulliq Energy Corporation (QEC) eyenzelwe abafundi ababhalise kwiziko elisemthethweni elamkelweyo. Kuya kufuneka ube ungumhlali waseNunavut ukuze ufaneleke kwimfundo yokufunda, isebenza kuzo zonke iindawo zokufunda.
Ifom yesicelo iyafumaneka Apha.
Esi sisifundi esisandula ukusekwa esinikezelwa yiYunivesithi yaseWilfrid Laurier, kwaye ababaninzi abantu abazi ngayo kwaye unethamsanqa lokuyifumana. Ixabiso lokufunda ngezifundo yi- $ 7,500 ngonyaka ukuya kuthi ga kwiminyaka emine kunye nebhaso lokufunda elinamava le- $ 10,000 iyonke eyi- $ 40,000.
Inikwa abafundi abasixhenxe abakhethiweyo, umfundi ngamnye ufumana umvuzo we-40,000 kodwa kufuneka ugcine ukugqwesa kwezemfundo ukuze uqhubeke nokuhlaziya isifundi. Abaphumeleleyo bakhethwa ngokusekwe kwimfundo yabo kwaye babonisa ingxelo yobuqu, uluhlu lwemisebenzi kunye / okanye impumelelo, kunye neleta ekubhekiswa kuyo.
Sebenzisa ithuba lokuba yinxalenye yabantu bokuqala abaziyo malunga nale mfundo kwaye qalisa ukusebenzisa kwangoko.
Ke, ezi zezi izibonelelo zokufunda ezingafunyaniswanga eCanada jonga umhla wokugqibela kunye nefom yesicelo kunxibelelwano ngalunye olunikiweyo kwaye uqalise iinkqubo eziyimfuneko ukuqala kwesicelo sobufundi obukhethile.
Unokufaka isicelo sokuba uninzi lwezi nkxaso-mali njengoko ufuna ukwandisa amathuba akho okufumana ubuncinci enye okanye ezimbini kuzo eziza kudlala indima enkulu ekucinyweni kwemali yokufunda. Funda imiyalelo ngocoselelo kwaye ungazibhidanisi.
Ubungcali obuphezulu be-15 be-Canadian Scholarships kubafundi
Ubungcali obuphezulu be-8 kwi-Theological Studies eKorea
Ubungcali bee-15 kubafundi abakhulileyo eCanada
Ukufundiswa kwee-25 kubafundi baseNdiya ukuba bafunde kwamanye amazwe
I-13 yezeNkxaso-mali zikaRhulumente waseKhanada eziFundiswe ngokupheleleyo
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Scholarships yaseCanada Scholarships epheleleyo Ulwabiwo-mali lwasekhaya Masters Scholarship I-PhD Scholarships Scholarship Postgraduate Iingcebiso zescholarship Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Ngaphantsi kweeSchoolships
Izifundo ezingaziwayo eCanadaizifundi eCanada ezingafunwangaizifundiswa ezingafunwanga eCanadaizifundi ezingafunekiyo eCanada
Post Previous:Iinkqubo ezili-10 zasimahla zasimahla zeHlabathi zaBafundi beZikolo eziPhakamileyo
Okulandelayo Post:I-10 yeekhosi eziBalaseleyo kwi-Intanethi kuLawulo lweProjekthi ngesicelo sasimahla
Pingback: I-49 + yeeKholeji zeKholeji ezingafunekiyo minyaka le | Faka isicelo ngoku
Agasti 27, 2021 kwi 7: 12 pm
Ndivela ePakistan kwaye ndifuna ukwenza imfundo ephezulu kwelinye ilizwe kodwa andinakukwazi ukubonelela ngeplz ukuba oku kungandinceda ndifuna ukuba ne-scolarship so plz help ..